Kuputika kweiyo iPhone 7 Plus, kunetsekana kutsva kwaApple | IPhone nhau
Apple inoongorora kuputika kunogona kuitika kweiyo iPhone 7 Plus
Kuputika kwemafoni efoni kwave kuri hutachiona musoro kubvira gore rapfuura. Samsung yakaedza kugadzirisa dambudziko rayo nekuputika kwayo kweGalaxy Note 7, asi mushure mekukundikana kwayo maziso ese ari pamafoni matsva. Nezuro chete vhidhiyo yemushandisi yakaenda pahutachiona paTwitter inoratidza kuti yake iPhone 7 Plus yaitaridzika kunge iri kudonha chaizvo. Uchapupu hwake hunoshamisa, asi hunofanana nezvakawanda zvevashandisi vakatambura chiitiko chakadai. Brianna Olivas, uyo akakuvara, anovimbisa izvozvo iPhone 7 Plus yaive ichiputa, ichipunzika, ichibva yaputika.
Apple inoongorora chiitiko cheiyi iPhone 7 Plus isina kuitwa
Iyo hombodo hombe yatove nayo mumaoko ayo iyo iPhone 7 Plus kubatanidzwa muchiitiko ichi. Chiitiko chakaenda nehutachiona pamasocial network souchapupu hwaBrianna Olivas, muridzi wechigadzirwa.
Foni yanga isina kuvhurwa kubva Chipiri, saka ndakaiendesa kuchitoro cheApple. Mushure mekuyedzwa kushoma, vashandi vakandiudza kuti iyo iPhone yaive yakanaka uye munguva pfupi yakatanga kushanda zvakajairika.
Pandakanga ndakarara ndakachajisa foni uye mangwanani akatevera mukomana wangu akaisa foni padresser. Paakaenda kunogeza akaona foni ichipfungaira ndikanzwa kakuhwihwidza. IPhone yakabatira moto ndikakurumidza kuibata ndokukanda mubathroom kwakuputika. Mukomana wangu akakurumidza kutora foni ndokunyora zvese.
Unogona kuona iyo vhidhiyo iri mubvunzo iripazasi pemitsara iyi. Iwe unogona kuona kuti iyo kesi iri kupfeka iyo iPhone yainyatso kuburitsa uye utsi hwaibuda hunoonekwa zvakare.
Saka yangu IPhone 7 pamwe nekuputika mangwanani ano yanga isiri kana kuishandisa, chaizvo hapana tsananguro yeizvi pic.twitter.com/sQ8CJt4Y69
- Bree✨ (@briannaolivas_) Kukadzi 23 kubva ku2017
Iyo iPhone 7 Plus yatove mumawoko eiyo Big Apple uye mutauriri wekambani akatotaura kuti iri kusangana naBrianna kuti vamuzivise zvakaitika uye, kana pakaitika mhosho yekugadzira, tora matanho anodiwa.
Mumavhiki mashoma tichava neruzivo rwepamutemo kubva kuApple asi panguva ino tinogona kutarisa kumashure. Samsung payakafanirwa kubata nekuputika kweGPS yayo 7, yakapomera kuti mukugadzirwa kwemabhatiri ayo, zvinhu zviviri zvakafanana uye zvisingawirirane zvakasangana, zvichikonzera kuputika uku. Ivo havana kukwanisa kugadzirisa iko kukanganisa, saka the terminal yakabuda pamusika. Chii chichaitika kuna Apple? Uku kuputika chichava chiitiko chega here? Zvingave here kuti Brianna's iPhone 7 Plus yaive nehurema hwekugadzira?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple inoongorora kuputika kunogona kuitika kweiyo iPhone 7 Plus